people Nepal » काठमाडौं महानगरमा मेयरका उम्मेद्वार को को ? काठमाडौं महानगरमा मेयरका उम्मेद्वार को को ? – people Nepal
काठमाडौं महानगरमा मेयरका उम्मेद्वार को को ?
काठमाडौं, चैत २८ – आउँदो वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको उम्मेद्वार चयन गर्न ठूला दलले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन् । काठमाडौंको जित–हारले समग्र राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित हुने भएकाले यहाँको मेयर बन्न विशेष गरी तीन ठूला पार्टीभित्र उम्मेद्वार बन्न होड पनि सुरु भइसकेको छ ।
देशको राजधानी र सर्वाधिक चर्चाको केन्द्रमा रहने काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेद्वार बन्न ठूला पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । ३२ वटा वडा भएको महानगरमा दुई लाख ७४ हजार चार सय ३८ मतदाता छन् भने तीन सय ७९ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
२०४९ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसका पिएल सिंहले काठमाडौंको मेयरमा बाजी मार्नुभएको थियो भने २०५४ को चुनावमा एमालेका केशव स्थापित विजयी हुनुभएको थियो ।
१९ वर्षपछि वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा पनि कांग्रेस एमालेबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । काठमडौंका नौवटा निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य मुख्य भाग महानगरभित्र पर्दछ । २०७० सालको चुनावमा नौमध्ये आठवटा क्षेत्रमा कांग्रेस र एउटा मात्र एमालेले जितेको थियो ।
आउँदो स्थानीय चुनावमा कांग्रेसबाट मेयरको उम्मेद्वार बन्न चाहने ६ जनाभन्दा धेरै छन् । स्वास्थ्य मन्त्री रहेका कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको नाम सर्वाधिक चर्चामा रहे पनि उहाँले आफू उम्मेद्वार नबन्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंबाटै निर्वाचित उद्योगमन्त्री समेत रहेका नविन्द्रराज जोशीको चर्चा पनि मेयरमा उत्तिकै छ ।
त्यस्तै भीमसेनदास प्रधान, तीर्थमान डंगोल, राजुराम जोशी, नरोक्तम वैद्य, प्रतिमान रञ्जितलगायका कांग्रेस नेताहरुले पनि उम्मेद्वारीका लागि सक्रियता बढाएका छन् । उपमेयरमा भने पूर्व महामन्त्रीप्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंहको नाम निश्चित भइसकेको कांग्रेस कार्यकर्ता बताउँछन् । उपत्यकामा सिंहको प्रभाव बलियो भएकाले उहाँ पक्षीय नेताहरुले नै टिकट पाउने सम्भावना छ ।
जुन पार्टी वा उम्मेद्वारले काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउने योजना ल्याउँछन् उसैले चुनावमा बाजी मार्ने संभावना बढी देखिन्छ । शिक्षित मतदाताको वर्चस्व रहेको काठमाडौंमा स्थानीय र नेवार समुदायको उम्मेद्वारलाई मतदाताले बढी पत्याउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बन्न एमालेभित्र पनि निक्कै प्रतिस्पर्धा छ । एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि सचिव योगेश भट्टराईको नाम सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । राजनीतिक प्रभाव र व्यवस्थापनका हिसाबले जटिल काठमाडौंको उम्मेद्वार एमालेले केन्द्रीय नेताहरुबाटै बनाउने संभावना प्रवल छ ।
शाक्य र भट्टराईबाहेक नेताहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, विद्यासुन्दर शाक्य, सानु श्रेष्ठ, वसन्त मानन्धर, बिना श्रेष्ठको नाम पनि उत्तिकै उठिरहेको छ । २०५४ सालमा एमालेका तर्फबाट मेयर जितेर माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले फेरि एमालेमै फर्किएका केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने आवाज पनि उत्तिकै उठिरहेको छ ।
महानगरपालिकाको उम्मेद्वार स्थायी समितिले नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेकाले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वारका आकांक्षी सक्रिय छन् । तर चुनाव नजिकिएसँगै एमाले काठमाडौंमा बढेको विवादले उम्मेद्वार छनौटको विषय झन पेचिलो बनेको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बन्न चाहनेको संख्या कांग्रेस र एमालेको तुलनामा कम देखिएका छन् । माओवादीबाट पोलिटब्युरो सदस्य एवं महानगर इञ्चार्ज सर्वोत्तम डंगोल, ३ नम्बर प्रदेशका इञ्चार्ज हितमान शाक्य, हिमाल शर्माको चर्चा भइरहेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुत्री रेणु दाहालले पनि काठमाडौंमा उम्मेद्वारी दिने बहस भए पनि उहाँको मतदता नामावली चितवनमा भएको कारण उहाँले काठमाडौंमा उम्मेद्वार बन्न पाउनु हुन्न । माओवादी निकट स्रोतका अनुसार डंगोल र शाक्यमध्ये एकजनाले टिकट पाउनेछन् । त्यस्तै राप्रपाले केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठलाई टिकट दिने निश्चित जस्तै छ ।